" နွေကန္တာဦး " မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှာအပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ ကနေ သောကြာနေ့အထိ ပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီရဲအောင်၊ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီထွန်းအိန္ဒြာဗို၊စည်သူဝင်း၊အောင်ပိုင်၊ဖြူသန့်ချော၊နန်းရွှေရည်၊မြနှင်းရည်လွင်၊သုတအောင်၊ကျော်သက်ဝေ၊အကယ်ဒမီခင်မို့မို့အေး၊လူမုန်း တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကာ ဒါရိုက်တာဇမ္ဗူထွန်းသက်လွင်က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ညွှန်း - နြေ...
ရွှေကြာဖူးသစ် ဇာတ်လမ်းတွဲကို Niyyayana Entertainment မှစီစဉ်ရိုက်ကူးပြီး ထပ်​ဆင့်​အကယ်​ဒမီ ရန်​​အောင်​ ၊ ထပ်​ဆင့်​အကယ်​ဒမီ ရဲ​အောင်​ ၊ အကယ်​ဒမီ အောင်ခိုင် ၊ လင်းမြတ်​ ၊ သီဟ ၊ ​ကောင်းစစ်​​သွေး ၊ သျှင်းမြတ်​ ၊ မုဏ်း ၊ ဈူဈူးဈာန်​ ၊ ​ဟေဇယ်​ညီညီထွန်း ၊ ဆုထက်​လှိုင်​ ၊ ဖြိုးအိန္ဒြာမင်း ၊ မိုးသီရိထက်​ တို့ကအဓိကပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
MYANMAR MAGIC MEDIA မှစီစဉ်ရိုက်ကူးတဲ့ "9" သူငယ်ချင်း ၉ ယောက် - မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Haemosu သည် Damul ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးရှိ Gojoseon ဒုက္ခသည်များအား...
Forever Stars ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးများအဖြစ် အကယ်ဒမီ ပန်းချီ စိုးမိုး၊ အကယ်ဒမီ ထွ...
Media Kabar ကစီစဉ်ရိုက်ကူးတဲ့ "ဥယျာဉ်မှူးဖြစ်ဖူးချင်သည်" ဇာတ်လမ်းတွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် ကျော်ဆု၊ရဲအောင်၊ဟိန်းထက်၊ခေးဆက်သွင်နဲ့ပိုးကြာဖြူခင်တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Make Me Beautiful အစီအစဉ်က LOREAL Paris နဲ့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ ပထမဆုံးသော Make-Up Artist ရှာပုံတော်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကနေ အံ့သြဖွယ်မိတ်ကပ်အစွမ်းနဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၂ ဦးက စိတ်ဝင်စားဖွယ် Challenge တွေကိုယှဉ်ပြိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမိတ်ကပ် Artist တွေက ပါဝင်အကဲဖြတ်ပေးကြမှာဖြစ်ပြီး Winner ကဆုကြေးငွေ...
J Popular Lifestyle & Culture Japan Sea
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပွဲတော်တွေ လူမှုဘ၀တွေနဲ့ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကို အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် J Popular Lifestyle & Culture Japan Sea အစီအစဉ်ကို (စနေနေ့) ညနေ (၅း၃၀) အချိန် MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်...
ဦးဘုန်းဥာဏ် ၊ စိုင်းနေရောင် ၊ ဦးဗညားကိုလ်း နှင့် ဦးသီဟ တို့မှာ စီးပွားရေးပါတနာများ ဖြစ်ကြသည့်အပြင် လောင်းကစားခြင်းကိုဝါသနာပါသော ဝါသနာတူများဖြစ်ကြသည် ။
စိုင်းနေရောင်သည် မိဘစီးပွားရေးကို ခွဲယူလုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ Top 10 ဝင် အသက်အငယ်ဆုံး သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်သည် ။ စိုင်းနေရောင်တွင် ကလေးဘဝကတည်းက ညီအစ်ကိုရင်းလို ချစ်ခင်ရသည့် ကိုလ်းဆိုသော သူငယ်ချင်းတစ်ဦးရှိသည် ။ ကိုလ်းသည် မိဘနှစ်ဦး၏...
ရိုဟန်နဲ့မူစကန်တို့ဟာ အိမ်ထောင်သက်ငါးနှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံပါ လင်မယား နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြပေမယ့် အမြဲတမ်း တစ်ကျက်ကျက် ရန်ဖြစ်ကြတဲ့စုံတွဲပေါ့။ မူစကန်အမေ တာရာက သူုတို့လင်မယားစကားများရန်ဖြစ်လွန်းလို့ သဘောမကျဖြစ်နေပေမယ့် ရိုဟန်တို့ မိသားစုကတော့ မူစကန်ကိုတော်တော်ချစ်ကြပါတယ်။ တစ်နေ့ သူတို့နှစ်ယောက် ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ရိုဟန်နဲ့မူစကန်နှစ်ယောက်လုံး အတိတ်မေ့သ...
ဂျီဝန်းက ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်ရန်အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲပညာသင်ယူပြီး ဘွဲ့ရယူခဲ့ပါတယ်။ ဘွဲ့ရပြီးတဲ့ နောက်မှာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာ အတွင်းရေးမှူ...
"တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီဆိုကတည်းက အနိုင်ရှိမယ် အရှုံးရှိမယ်။ တရားတဲ့နည်းနဲ့ပဲနိုင်နိုင် မတရားတဲ့နည်းနဲ့ပဲနိုင်နိုင် အားလုံးက အနိုင်ရဖို့ပဲ ကြိုးစားကြတာလေ။ အဓိကက အဲ့ဒီကြူံလာတဲ့ အရှုံးကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ပဲလိုတာပါ"
မာန်မာနကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ Message လေးပေးသွားမယ့် "မာန်"
Taurus V Production က စီစဉ်ရိုက်ကူးတဲ့ ပဉ္စလက်ရွာ ဇာတ်လမ်းတွဲကို MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက ရှေးရိုးစွဲ အယူသည်းမှုတွေရှိတဲ့ ရွာကြီးတစ်ရွာကိုအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ကြိုးစားမှုနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေမြင်တွေ့နေကျမဟုတ်တဲ့ မြန်မာမှုဓလေ့တွေကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် အကယ်ဒမီကျော်သူ၊အောင်မင်းခန့်၊သူရိယ၊နေအဉ္ဇရာ နဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွ...
ကျန်းရှောင်သည် မတော်တဆမှု တစ်ခုကြောင့် သတိလစ်မေ့မျောနေရာမှ သတိပြန်ရလာသည်မှာ သုံးလလောက်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။သူမ သတိလစ်မေ့မျောနေချိန်တွင် ချင်မင်းဆက်ခေတ်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များကို မမေ့နိုင်ဘဲ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သမိုင်းပြတိုက်သို့သွားကာ ချင်မင်းဆက် ခေတ်အခါက ရုပ်ပုံများကို ကြည့်ရှုလေ့လာနေခဲ့သည်။ သူမ မေ့မျောနေစဉ် ကာလအတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များမှာ တကယ်လား၊ အိပ်မက်လားဟု ဝေခွဲမရဖြစ်နေပြီး ရာဇ၀င်ထဲမှာ...
အေးစက်မာကျောတဲ့ နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အပြုံးနဲ့ပုရိသအပေါင်းကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပေမယ့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ သူ့နှလုံးသားကို မလှုပ်ခါနိုင်သေးတာကတော့ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် ယူဂျီနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် မျက်လုံးကွယ်သွားရှာတဲ့ အသက် ၆ နှစ်အရွယ် သားငယ်ကို စွန့်ပစ်ပြီး အောင်မြင်မှုရရှိအောင် ကြိုးစားရုန်းကန်လာခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ကသူ့ရဲ့အမှားကြောင့် အမြဲစိုးထိတ်ပြီး အထီးကျ...
Galaxy STAR 2017
Galaxy Star ပြိုင်ပွဲကို Local Challenge, Second-Premier Challenge, Third-Galaxy Camp, Four-Korea training Camp and Last-Dream league Live ဆိုပြီး အဆင့် ၅ ဆင့်နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းအမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ မည်သည့်သီချင်းအမျိုးအစားနဲ့မဆို နှစ်သက်ရာ ပုံစံနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး Galaxy Star 2017 ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှာ အပတ်စဉ်သောကြာနေ့...
J POPular Foods JAPAN SEA
ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ၊ အစားအသောက်ပုံစံ ၊ ရေပူစမ်းတွေအပြင် အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေနဲ့အတူ ဗဟုသုတတွေအများကြီး ရရှိစေမယ့် J POPular Foods JAPAN SEA အစီအစဉ်ကို စနေနေ့ ညနေ ၅း၃၀ အချိန်တွင် MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျူအင်ဂျောင်းသည် မိသားစုစီးပွားရေးအခက်အခဲကြောင့် တပ်ထဲ ၀င်ရောက်ပြီး မိသားစုအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီပေးနေ သူဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူအင်ဂျောင်းသည် ဂန်းယွန်းဟိုနဲ့ တပ်ထဲတွင် တွေ့ရှိပြီးနောက် အပြန်အလှန် ချစ်မြတ်နိုးကြပြီး ဂန်းယွန်းဟိုရဲ့ အမေကြောင့် ချစ်လျက်နဲ့ကွဲကွာခဲ့ရပါတယ်။ ဂျူအင်ဂျောင်းရဲ့အဖေ ဂျူမြောင်ရှစ်မှာ တကယ်တမ်း မွေးဖွားစဉ်အချိန်တုန်းက ဂန်းယွန်းဟို၏အဖေ ဂန်းဟန်ဂီနှင့် ကလေးချင်းမှားပြီး နှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်လုံးလုံး...
Discovery Of Taste
ပရိသတ်များအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နေရာဒေသများမှ အလှအပများကို ခံစားရင်း ဒေသထွက်အစားအစာများ ချက်ပြုတ်မှု၊ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့များကိုပါ တထိုင်တည်း ကြည့်ရှုခံစားနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်တင်ဆက်မယ့် Discovery Of Taste အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်ဒေသတစ်ခုမှ ထင်ရှားသော အစားအစာများကို ဒေသခံများ ကိုယ်တိုင်ပုံစံကွဲပြားစွာ ချက်ပြုတ်ပြသမှုနဲ့အတူ ဒေသတစ်ခု၏ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊၀တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် တောတောင်ရေမြေသဘာဝတို့ကို တင်ဆက်ြ...
သိုင်းလောက၏အရှုပ်အထွေးများ နေရာ ရာထူး စည်းစိမ် လိုချင်တပ်မက်မှုလောဘကြောင့် လုယက်တိုက်ခိုက်မှုများ မိဘများ၏ ရန်ငြှိုးများကြောင့် လူငယ်တို့၏ အချစ်ရေးလမ်းခရီးမှာ ဖြောင့်ဖြူးခြင်းမရှိပုံများကို သိုင်းကွက်ဆန်းများ ကင်မရာအထူးပြုလုပ်ချက်များဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားသော သိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းတစ်ခု ...
MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှာ အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့မှ ကြာသပတေးနေ့အထိ ည-၉း၁၅ အချိန်မှာပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
“ချစ်သူထွင်းတဲ့ အက္ခရာ” မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ကို MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှာ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိ ည-၇း၁၅ အချိန်မှာပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
နယ်မှာဆိုရင် ရိုးသားပြီးမိဘမဲ့ကလေးတွေကို စာသင်ပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာလေး ၊ တစ်ရွာလုံး၊ တစ်မြို့လုံးက ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ နန္ဒ ...
ရန်ကုန်က မေထိပ်ထားစံကုမ္ပဏီမှာတော့ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး၊ သူဌေးကို ကလန်ကဆန် လုပ်တတ်သူ ... ကာရိုက်တာနှစ်မျိုးနဲ့ န...
MISSION ASIA (SINGAPORE)
ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ယောက်၊ ခက်ခဲတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ ၊ မတူညီတဲ့ ဂိမ်းတွေ ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ ၊ ခံစားမှုတွေ ၊ ရယ်မောစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေနဲ့ အာရှတခွင်မှာရှိတဲ့ လည်ပတ်လို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေကို သိနိုင်တဲ့ အံ့သြစရာ ခရီးစဉ် ၊ ဒါတွေအားလုံးကို ဒီအစဉ်အစီမှာ မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ ...
MISSION ASIA အစီအစဉ်ကို MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှာ အပတ်စဉ်စနေနေ့ ညနေ-၅း၃၀ အချိန်တွင်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
" ချစ်ခြင်းပြိုင်နှလုံးသား "
သွက်လက်လှပသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ခွေးထရိန်နာလေး ချန်ချန်သည် ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သည့် ခေတ်သမီးပျိုပီပီ အတွေးအခေါ် ခေတ်မီသော်လည်း အမြစ်တွဲနေဆဲဖြစ်သည့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများထဲ ရုန်းမထွက်နိုင်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ချန်ချန်က အမြဲလိုလိုအမှန်တရားဘက်တော်သားအဖြစ် ရပ်တည်ပြီး အမှားကို ဆန့်ကျင်ရန် ၀န်မလေးသူဖြစ်သည်။ချန်ချန်နှင့် လုံးဝ ခြားနားသည့် စည်းကမ်းကြီးပြီး မိသားစုတစ်ခုလုံးကို သေ၀ပ်အောင်အုပ်ချုပ်နေသည့် အူမာဘင်နှင့် ချန်ချန်တို...
အွန်ဟီးနဲ့ အွန်နာတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူမှာ လူယုံဖြစ်တဲ့ မန်နေဂျာသတ်ရဲ့ ယုတ်မာကောက်ကျစ်မှုကို သိရှိပြီး စကားများရန်ဖြစ်ရင်းတံတားပေါ်မှ ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်မှန်ကို မသိတဲ့ အွန်ဟီးတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကို မန်နေဂျာဘတ်က အဖေဖြစ်သူစီးပွားပျက်၍ ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့အတွက် ဆိုးလ်မြို့ကို အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုးလ်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ နတ်သမီးမိဘမဲ့ဂေဟာကို ပို့ခဲ့ပါတော့တယ်။ အွန်ဟီးရဲ့ညီမြ...
ကျန်းရှောင်သည် ချစ်သူနဲ့ စကားများရန်ဖြစ်ရင်း ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရာမှ သတိလစ်မေ့မျောသွားပြီး သတိပြန်ရချိန်တွင် သူမဟာ ၁၈ ရာစုချင်မင်းဆက်ခေတ်ကို သခင်မလေးလော့ရှီးအဖြစ် ရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အစ်မဖြစ်သူ လော့လန်နဲ့ တခြားသူများက သူမကိုလှေခါးပေါ်မှပြုတ်ကျပြီး အတိတ်မေ့နေတယ်လို့ ထင်မှတ်နေကြပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းမွန်ပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ လော့လန်က မင်းသား(၈)ရုံစစ်နဲ့ ဒုတိယဇနီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းရှောင်သည် လော့ရှီးအဖြစ် ဟန်ဆောင်ရင်း...
နဂါးမင်းလည်းကူညီ တိုက်ခိုက်ရာတွင် ဂဠုန်မင်း၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နဂါးမင်းနာကျင်မှုများစွာဖြင့် သေဆုံးခဲ့ရပါသည်။ နဂါးမင်းမသေဆုံးခင် အချိန်တွင် နဂါးမင်း၏ကျိန်စာနှင့်အတူ ပါးစပ်အတ...
တရုတ်တန်းမှာ အကြီးဆုံး တရုတ်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ကိုင်တဲ့ မိသားစုတစ်စုရဲ့ အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူတကာ အမြင်မှာတော့ ကံထူးပြီး အိမ်ထောင်ရေး သာယာသူလို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ ဟန်ပြလင်မယားလိုလိုသာဖြစ်နေတဲ့ သမီးကြီးဖြစ်သူ ဘုန်းဟယ်ယောင်း.. အသက်ကြီးပေမယ့် မရင့်ကျက်သေးတဲ့ ပြဿနာအိုး သားကြီးဖြစ်သူ ဘုန်းမန်ဟို..ချွေးမဖြစ်ပေမယ့် သမီးရင်းနဲ့ မခြား အနွံတာခံ အနစ်နာခံပြီး မိသားစုအပေါ် ပေးဆပ်ထားတဲ့ ဟန်မီဆွန်း..ထက်မြက်တဲ့...
ဆူဒိုဆေးရုံရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အမွေဆက်ခံသူ လီဂုချောဟာ မတောင့်မတနေလာခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ပေးကံကောင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။တစ်နေ့မှာတော့ လီဂုချောဘ၀ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်လေးမှာပဲ မိဘနှစ်ပါးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ ပုံမှန်သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ခဲ့တဲ့ သူ့မိဘတွေရဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုမှာ အချိန်မီတစ်ယောက်ယောက်သာ ရောက်လာခဲ့ရင် အသက်မီနိုင်ခဲ့မှာပါ။ လီဂုချောကတော့ မိခင်ဖြစ်သူက ကားအပြင်ဘက်ကို တွန်းချပေးခဲ့လို့...
ဂျိုဆောင်းခေတ်တွင် ဂျောင်းအို့ဆောဟု အမည်တွင်သော အကျဉ်းထောင်တစ်ခုရှိသည်။ ဂျီချွန်းဒို့မှာ ထိုအကျဉ်းထောင်တွင်း ထောင်ထိန်းအဖြစ်အမှုထမ်းလျက်ရှိသော ၀န်ထမ်းတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တွင် ဂျီချွန်းဒို့အား ကိုယ်ဝန်နေ့စေ့လစေ့ဖြင့် ဓားဒဏ်ရာရထားသော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည်။ ဂျီချွန်းဒို့မှာ သေအံ့ဆဲဆဲ ဖြစ်နေသော ထိုအမျိုးသမီးကို ထောင်တွင်းမှ အကျဉ်းကျအမျိုးသမီး တစ်ယောက်၏ အကူညီအဖြင့် ကလေးကို မီးဖွားစေခဲ့သည်။ ...
မိဘမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ နာယောင်းကို ဂျောင်းဝမ်က အိမ်ခေါ်လာရမှ ယူဂျောင်း၏ဒေါသနှင့် သမီးဆယ်ဂျင်း၏မနာလိုမှုများြ...
အချစ်ဦးနှင့် လွဲခဲ့တဲ့ရွှေစာတစ်ယောက် ကိုလူပျိုဘ၀ကို ခံယူချိန် မိန်းမပျို (၃) ဦးကြောင့် အချစ်တွေပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားချိန်တွင် ပြိုင်ဘက်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရင်း ရာသက်ပန်သိမ်းပိုက်ရန် ကြံစည်နေသော အပျိုကြီးမမ ဘေဘီနု၏လက်တွင် ကျရောက်လုချိန်မှာ အသဲကွဲအခြောက်မနှင့် တိုးတဲ့ “ကိုလူပျို”……….....
အထက်တန်းလွှာတွေရဲ့ ကျေးကျွန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက နက္ခတ်ပညာကို စိတ်ပါဝင်စားသူ ဂျန်ယောင်ဆေး ...
ဂျိုဆွန်းမင်းဆက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ထီးနန်းရရှိဖို့အတွက် အစ်ကိုအရင်းကိုပါ သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ရက်စက်ခဲ့သူ၊ ထီးနန်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ ဂျိုဆွန်းတိုင်းကို ရေရှည်တည်တံ့အောင် ကြိုးပမ်းနေသူ မင်းကြီး ဂင်ထယ်ဂျုံ ..
ဖခင်မင်းကြီးထယ်ဂျုံးဆီက ထီးနန်းမွေကို ဆက်ခံခဲ့ပြီး ဖခင်နဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာရော အပြုအမူပါ မတူတဲ့...
မင်းသမီး အိုဒန်းဗြောသည် ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းက မိဘနှစ်ပါး မီးထဲပါသွားပြီး မိဘမဲ့ဖြစ်ကာ သူဌေးလင်မယားနှစ်ဦးက မွေးစားခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက လိမ္မာရေးခြားရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မွေးစားမိဘတွေအပေါ် တတ်သိနားလည်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမမွေးစားခံခဲ့ရတဲ့ မိသားစုထဲမှာ ဂုံဂျွန်ယောင်းဆိုတဲ့ သားတစ်ဦးရှိပါတယ်။ ဂုံဂျွန်ယောင်းဟာ အိုအန်းဗြော သူတုိ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီး မွေးစားခံခဲ့ကတည်းက စိတ်ထဲကြိတ်ပြီး ချစ်မြတ်နိုးနေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှ...
မင်္ဂလာပါ (The Morning Show)
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ်အသစ်အဖြစ် မင်္ဂလာပါ အစီအစဉ်သစ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့က စတင်ပြီး MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ အစီအစဉ်သစ်မှာ လတ်တလော ရေပန်းစားနေသော အလှအပရေးရာ၊ ကျန်းမာရေး၊ သတင်းအချက်အလက်၊ ခရီးသွားလမ်းညွှန်၊ ရုပ်ရှင်အညွှန်း စတဲ့ အကြောင်းအရာ အစုံကို မိနစ်(၉၀) ကြာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် တင်ဆက်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ အစီအစဉ်သစ်ကို နေ့စဉ်နံနက် ၈နာရီကနေ...
Myanmar's Got Talent (Season-2) အစီအစဉ်လေးမှာတော့ ထူးခြားတဲ့ Talent တွေအပြင် Golden Buzzer ဆိုတဲ့ အထူးအစီအစဉ်သစ် ပါဝင်လာပါတယ်..ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ အရည်အချင်းကို သဘောကျပြီဆိုရင် ဒိုင်လူကြီး လေးဦးက တစ်ဦးကို တစ်ကြိမ်သာ နှိပ်ခွင့်ရှိပါတယ်..အဲဒါကို Golden Buzzer လို့ခေါ်ပါတယ်..Golden Buzzer နှိပ်ခံရတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ Live Show ကို တခါတည်း တန်းရောက်သွားမှာပါ...ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အြ...
အောင်ထက် (ပြိုင်ပွဲဝင်သီချင်းများ Music Documentary Program)
အောင်ထက် ပြိုင်ပွဲဝင်သီချင်းများ Music Documentary အစီအစဉ်လေးမှာတော့ သူပြိုင်ပွဲဝင်စဉ် ယှဉ်ပြိုင်မှုတလျှောက်မှာ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကို ပရိသတ်တွေက အကောင်းဆုံး ပုံစံနဲ့ နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်ထက်ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းတွင်
တကယ်တော့ သဘာဝတရားဆိုတာ အချိန်နှင့်အမျှ ဖြစ်တည်ပြောင်းမှုတွေနဲ့ပေါ့ ..
ရမ္မက်ခိုးတွေရဲ့ အရှိန်အ၀ါကြောင့် သာယာလှပတဲ့ လောကကြီးက အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုးသွားမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ..
သင် အမှောင်ကလာပြီး အလင်းကို ပြန်မှာလား..
၀ဋ်ဆိုတာ နွားခြေရာခွက် နောက်က လှည်းဘီးလိုက်သလို သင့်နောက်ကို ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်နေမှာပါ..
ကံ ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ပြုခဲ့သလောက် ကိုယ့်ဆီ နောက်ဆုံးပြန်ရောက်လာမည် ဆိုသည့်အကြောင်း...
ဆွန်းဂျိုမင်းကြီး လက်ထက်တွင် ရှေးဘုရင်များ လက်ထက်က မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သော မှားယွင်းနေသော ဂျိုဆွန်း သမိုင်းမှတ်တမ်းကို ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုမှတ်တမ်းကို 'ဂျင်ဘီရို့' ဟု ခေါ်တွင်သည်။ မြောင်တိုင်းပြည်၏ မှတ်တမ်းတွင် ထယ်ဂျို မင်းကြီး လီဆောင်းဂယ်က ဂိုယောဘုရင်ကို လုပ်ကြံပြီး နန်းတက်ခဲ့သည်ဟု မှားယွင်းမှတ်တမ်း တင်ခံခဲ့ရသောကြောင့် နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာ ကြာအောင် သံတမန်များ အကြိမ်ကြိမ် စေလွှတ်ပြီး ပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း...
အိမ်ဘေးကပ်လျက် နေထိုင်ကြပြီး အရာတိုင်းဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေကြတဲ့ ဦးညှပ်စိအိမ်နဲ့ ဒေါ်စိန်တုတ်တို့နှစ်အိမ်ရဲ့ တစ်အိမ်နဲ့ တစ်အိမ် မဲ့ကာ ရွဲ့ကာ စောင်းမြောင်း ချိတ်ကာ နေကြပြီး နီးနီးလေးနဲ့ကွဲ နီးနီးလေးနဲ့ ရှုပ်နေကြတဲ့ အကြီးအသေး ပြဿနာမျိုးစုံတို့ကို ဟာသအနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းဖွဲ့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ “အိမ်နီးချင်း” မြန်မာရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲအား တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ နေ့လယ် ၂း၂၀ အချိန်တွင်...
ဂျင်းဝမ်းလုပ်ငန်းစု ဥက္ကဌကြီး ဂျင်းဂျူလန်းမှာ ထက်မြက်လှပြီး သားသမီးများ အပေါ်တွင် သြဇာညောင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဂျင်းဂျူလန်း၏ သားသမီးများဖြစ်သည့် ဂိုထယ်ဟီး၊ ဂိုထယ်ဆောင်းနှင့် ဂိုထယ်လန်းတို့မှာ မိခင်၏ လုပ်ငန်းများကို လိုချင်တပ်မက်နေကြသူများ ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးတည်းသာ သားဖြစ်သူ ဂိုထယ်ဆောင်းကို အချစ်ပိုသည့် ဂျင်းဂျူလန်းမှာ သားဖြစ်သူအား ဂျင်းဝမ်းသူဌေးရာထူးကို ပေးထားခဲ့သည်။ ဂိုထယ်ဆောင်းနှင့် ဟန်ဂျောင်ယောင်းတို့တွင် သားသမီးနှ...
ကလေးတို့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရာမှာ လွယ်ကူအကျိုးရှိပြီး ပျော်ရွှင်စရာ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပျော်ရွှင်လေ့လာ အင်္ဂလိပ်စာ အစီအစဉ်လေးကို တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ နံနက် ၈း၄၀ တွင်တစ်ကြိမ်၊ ညနေ ၄း၃၀ တွင် တစ်ကြိမ် ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ကလေးတို့အကြိုက် Cartoon Series (Welcome To Sky Ville) အစီအစဉ်လေးကို နေ့စဉ် နံနက် ၈း၀၀၊ ညနေ ၄း၀၀ အချိန်တိုင်း MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းတွင် တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းကနေ အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့ မှ သောကြာ နေ့ အထိ (နံနက် ၉း၄၀၊ ည ၉း၄၅ ) အချိန်များတွင် တင်ဆက်ပေး နေတဲ့ အနုပညာ မိုးကောင်းကင် အစီအစဉ်မှာတော့ ရုပ်ရှင် ဂီတ စာပေ ပန်းချီ သဘင် အစရှိတဲ့ အနု ပညာနယ်ပယ်စုံ က အနု ပညာ မြင်ကွင်းသတင်းများ၊ အနုပညာ ဖန်တီးမှု များ နောက်ကွယ်က အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ၊ ပြည်သူချစ်အနု ပညာရှင်များရဲ့ လတ်တလော အနုပညာ သတင်းများ၊ လတ်တလော ရုံ တင်ကား စာရင်းများ၊ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ စာ အုပ်မိတ်ဆက်များ ၊...
ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ၊ လူတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ရောဂါအကြောင်းအရာတွေ၊ ကုသရန်နည်းလမ်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်နည်းတွေကို ဆရာဝန်များမှ ဆွေးနွေးပြောကြားပေးနေတဲ့ Health Fix အစီအစဉ်လေးကို ညနေ ၆း၁၀ အချိန်တွင် နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပြသပေးလျက်ရှိပါတယ်။
စုန်းဆိုတာကို အယုံအကြည်မရှိသင့်ဘူးလို့ သင့်ကို လူတွေ က ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့ ခဲယဉ်းတဲ့ အရာတွေဟာ ပြင်ပလောကမှာ အမှန်တကယ်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ စုန်းပညာကို ကစားစရာအတတ်တစ်ခုလို အပျော်တမ်း သက်သက်လေ့လာခဲ့သူ "အမန်ဒါ" ဆိုတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေး တစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ မှော်အစွမ်းတွေကို အသုံးချရင်း သူမကိုယ်တိုင် မထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
လူတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ချင်တဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့...